‘IMcCord ivale ngenxa yokungavumelani kwayo nathi’ | IOL Isolezwe
‘IMcCord ivale ngenxa yokungavumelani kwayo nathi’
Isolezwe / 24 January 2013, 10:27am / PHUMLILE NTSELE
INHLOKO yoMnyango wezeMpilo esifundazweni, uDkt Sibongile Zungu, esithangamini sabezindaba izolo eThekwini. Uthi ukungavumelani phakathi kwezikhulu zoMnyango nezesibhedlela i McCord nemibandela yikho okwenze ukuthi sigcine sikhethe ukuthi sizovala
ISIKHULU esiphezulu esibhedlela i McCord eThekwini uMnuz Kevin Smith ecacisa ngezinkinga ezikhungethe isibhedlela eziphoqa ukuthi basivale ezinyangeni ezimbili kusukela manje
Izikhulu zoMnyango wezeMpilo zithi alikho iphutha elenzekile ngesinqumo sokuvalwa kwesibhedlela saseThekwini, iMcCord, esizovalwa ngoMashi ngoba yizona ezitshele uMnyango ngesinqumo sazo sokusivala lesi sibhedlela emva kwezingxoxo eziningi okucace bha kuzona ukuthi akukho ukuvumelana.
Lokhu kushiwo yiNhloko yoMnyango, uDkt Sibongile Zungu, esithangamini sabezindaba izolo eThekwini.
UDkt Zungu ukuqinisekisile ukuthi isibhedlela besisebenza njengesizimele kungesona esikahulumeni wathi kodwa noma kunjalo uMnyango bewusibonelela ngemali ngoba bekucaca ukuthi siyehluleka ukuzimela ngokwaso.
“Ngemuva kweminyaka eminingi sinokusebenzisana nesibhedlela, sinebhajethi yaso ebivela eMnyangweni ngenxa yokuthi besinezinhlelo esiziqhubayo ezifana nalolo lokunakekela abakhungethwe yigciwane lengculazi nelokuqeqesha amathwasa odokotela nezinye, sigcine sesiphelelwa wumdlandla.
“Lokhu kungenxa yokuthi sona besilokhu siqhubekile sikhokhisa umphakathi neziguli imali enkulu ngaphambi kokuthola usizo lokwelashwa kuso yize sisinika izimali,” kusho uDkt Zungu.
Uthe okuyikhona obekubaqeda umdlandla wukuthi emalini yesibonelelo naleyo ebikhokhwa yiziguli kodwa uhulumeni ubengahlomuli nzuzo ekupheleni konyaka ukuze akwazi ukuyabela nezinye izikhungo ezidinga usizo. Kunjalo nje besingakhiphi mibiko ngalezi zimali ukuthi zisetshenziswe kanjani.
Kunalokho nguMnyango obugcina sewusobhishini sekufanele uchazele ihhovisi likaMgcinimafa ngezimali ezisetshenzisiwe.
Uthe ikomiti lesibhedlela naboMnyango lisazohlala licubungulisise kahle lesi sinqumo bese kwenziwa umbiko ogcwele ngekusasa laso kodwa wathi kuzoba nzima ukuqhubeka nokukhipha izimali zawo njengoba isibhedlela sakucacisa kudala ukuthi sona sesifuna ukuzimela futhi sabuye samisa nezinhlelo ezihlose ukusiza abantu abentulayo.
Mayelana nekusasa labasebenzi besibhedlela abasengozini yokuphelelwa yisinkwa uthe njengoba abasebenzi beqashwe yisibhedlela hhayi nguhulumeni kuzoba nenkinga enkulu impela.
“Ngeke sikwazi ukubathatha abasebenzi baso sibafake kwezinye izibhedlela zethu ngoba baqashwe yisibhedlela kodwa-ke uma kunesidingo futhi kunezikhala nebhajethi ivuma siyobaqasha abanye babo,” usho kanje.
Engxoxweni Isolezwe elike laba nayo nesikhulu esiphezulu saseMcCord, uMnuz Kevin Smith, wathi baphoqeleke ukusivala isibhedlela ngoba uMnyango bewungaphumeli obala ngokuthi usazoqhubeka yini nokusibonelela ngezimali.
Wathi baze baphoqeleka nokuvala ezinye zezinhlelo ngenxa yokwentula imali.
Inhloko yoMnyango iveze ukuthi lesi sibhedlela besenza inzuzo engaphezu kuka-R7 million ngonyaka kodwa siyiququde sodwa bona basale ngaphandle.
Mayelana nokuthi isibhedlela sikhala ngokuthi asinikwanga isikhathi esanele esiyizinsuku ezingu-90 ukuze sicubungule kahle ukuthi sizothathani sihlaganise nani uthe lezi zinsuku zincane kabi uma kuqhathaniswa neminyaka eminingi kangaka bephakamisa ukuthi iziphathimandla zaso zivume ukuba sisebenze njengesikhungo sikahulumeni.
Inyunyana yabasebenzi bezempilo iNehawu nayo igxeke izikhulu zaseMcCord ngokunga-sebenzisani kahle noMnyango.